Kani waa borogaraamka xisbika garabka bidix - Helsingin Vasemmistoliitto
Kani waa borogaraamka xisbika garabka bidix
Muokattu 15.03.2019 klo 11:11.
Suomi Svenska English Davvisámegiella Romani Somali По-русский سۆرانی العربية
Helsinki vasemisto waxaey ugu horreyn xoogga saareen arimaha quseeyo dadka degan oo ku nool magaalada Helsinki. Uguhoreyn waxaan ka hor tegeynaa kala sooc iyo midab takoor ama cunsurnimo.
“Eriarvoistuminen” – sinnaan la’aanta waa in aan lakala sarreyn dadku is ku xuquuq yahay, sad bursigana la joojiyo qofkastana nolol fiican ku noolaado. Daryeelka caafimaad waa in aan la qaaliyeen.
Dadku waa in ay u sinnaadaan xagga wax barashada ,caafimaadka iyo shaqooyinkaba magaaladana ay san jirin qeybo daka faqriga kaliya degaan iyo kuwo lacagleey kaliya degaan. Sidoo kale waa in la heli karo guryo kiradoodu jabantahay sidoo kale qof walba waa in uu helo, “perus tulo” taasoo macnaheedu yahay qof walib helo lacag nolol maalmeedkiisa isagoon la wareerin lana xujeeynin. Sidoo kale waa in cunsuriyadda laga hor tago dadkana aan sinjiyad ama midab la gu kala soocin . Wax midab takoor ah ama cunsurudiyeen ma ogolin.
“Työelämän murros” – isbedelada ku dhacay shaqada iyo shaqaalaha waxaa looga hortagi karaa in dadka aqnootooda xirfadeed kor looqaado.sidaa darteed waxbarashadu waa in ay laca la aan tahay illaa heer jaamacadeed.
waa in la helo goobo wax lagu barto oo lacag lacag la bixin ama aan qaali ahayn. qofkii shaqo laan ku dhacdo waa in uu helikaro meel uu wax ka barto aqoontiisana ku kordhiyo haddii uu rabo in uu wax barto asagoo lacagta shaqolaa,aantana aan laga goosan
qofkii shaqo rabo waan in uu helo shaqo xuquuqdiisa aan lagu xad gubeeyn . shaqooyinka lacagta yar la qaato mushaharku waa in uu noqdo mit nololmaalmeedka qofka ku filan .
“Tasaarvoisempaan työelämaan kuuluu tasa-arvoinen perhevapaamalli” – (6+6+6) tasoo macneheedu yahay in faamilka ilmo u dhasho waa in uu helo xaq u yeesho fassax hooyo iyo fasax aabbo. (6+6+6) Muddo dhan.
“Ilmastonmuutos” – waa in laga hor is bedelka cimilada iyo nabaad guurka soo batay.
Isbedelka cimilada iyo degaan guurka aduunka ka dhacaayo wuxuu khuseyn karaa ama saameeyn ku yeelan karaa dadka degen Helsinki. Waxaa laga ma maarmaan ah in loo tabaa busheysto.
Dadka Helsinki degen iyo dawladda hoose ee Helsinki waa in ay go, aan ka gaaraan sidee loo ga hortago isbedelka cimilada ka imaan karo si jiilka dambe ee imaanayo ee dhalan doona ay u ga bad baadaan cimilada xumaaneyo.
Waa in la xadido “liikenne päästöä” iyadaa la xoo jinaayo lana fududeynaayo “raideliikkenne”, tasoo macnaheedu yahay in la fududeeyo gaadiidka daw ladda magaala ka shaqeeyo.
Waa in la ilaaliyo lana na diifiyo biyaha iyo xeebaha Helsinki ku yaalo. “Luonnon moninaisuus ja luonnon moninaisuus” oo macnaheedu jahay in aan dhibaato loo geysan deegaanka iyo xayawaanka ku noolba.
“Helsingissä ja koko Suomessa luovuttava kivihiilen käytöstä vuonna 2025 mennessä” – Oo macnaheedu tahay waa in aan la shidin dagax madow (dhuxusha) muddaas wixi ka dambeeya aan la istic maalin “kivihiili” dhuxusha modow .